मिडिया एनपी – Page 1561 – Medianp
कान्छीसँग सोलमारीमा टुच्च लगाउँदै भेटिए रञ्‍जित (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४१०:०८0
काठमाडौँ । गायक विश्वराम कार्की सोलमारीमा कान्छीसँग टुच्च लगाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिएका छन् । उनको नयाँ पप गीत सोलमारीमा उनी यो रुपमा देखिएका हुन् । उक्त गीतमा लय, संगीत तथा स्वर गायक विश्वराम कार्की (आरके) को
विश्व प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री स्टेफेन हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा निधन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०९:५७0
काठमाडाैं, ३० फागुन । विश्व प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री स्टेफेन हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको मंगलबार निधन भएको परिवारले जनाएको छ । हकिङले ब्ल्याक होल र सापेक्षताको सिद्धान्त प्रतिपदान गरेका थिए । ‘अ
बलिउडका कुन हिरोइनले कति लिन्छन पारिश्रमिक ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०९:५६0
बलिउडमा अहिलेकी सर्वाधिक महँगी हिरोइन को होलिन् ? तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, ती हिरोइनले प्रतिफिल्म कति पारिश्रमिक लिन्छिन् होला ? हो, बलिउडकी अहिलेकी सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने हिरोइन हुन्, दीपिका पादुकोण । आफू अभिनीत फिल्म एकपछि
आफ्नै विमानमा यात्रा गर्ने चर्चित दश फुटबल स्टार, कसको जहाजको मूल्य कति ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०९:४७0
काठमाडौं, ३० फागुन । फुलबल संसारको सबैभन्दा चर्चित खेल । फुटबल मन नपराउने सायदै कम होलान । फुटबल फ्यानहरूका आ–आफ्नै फेभरेट खेलाडी छन् । उनीहरूको जिवनशैलीका बारेमा जान्न प्रशंशकहरू उत्सुक रहन्छन् । चर्चित फुटबलरको लाइफस्टाइल
मिस्टर परफेक्सनिस्ट अर्थात् आमिर खानको आज जन्मदिन, ५३ वर्ष लागे
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०९:२३0
एजेन्सी, ३० फागुन । बलिउडमा ‘मिस्टर परफेक्सनिस्ट’ का नामले परिचित आमिर खान आज आफ्नो ५३औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । ‘कयामत से कयामत तक’ फिल्मबाट डेब्यु गरेका आमिर बलिउडमा भर्सटाइल छवि भएका अभिनेता मानिन्छन् । उनी अभिनय,
हङकङको तितो यथार्थ, वर्षको ५० हजार तिरेर पिँजडा जस्तो घरमा बस्न बाध्य
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०९:१९0
यस्तो पिँजराको कल्पना गर्नुहोस्, जसको लम्बाइ दुई मिटर र उचाइ एक मिटरभन्दा थोरै मात्र बढी छ । सोच्नुहोस्, यस पिँजरामा ती कोठा छन् । र, अब सोच्नुहोस् कि यो नै तपाईंको वासस्थान हो । हङकङमा सस्ता
महिला तथा किशोरीलाई फेसबुकमा साथी बनाई उसको अश्लील भिडियो बनाई पैसा ठग्ने पक्राउ
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०९:०१0
रत्ननगर, चितवन, ३० फागुन । महिला तथा किशोरीलाई फेसबुकमा साथी बनाई उसको तस्बीरबाट अश्लील भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गरी पैसा ठग्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसरी पक्राउ पर्नेमा नवलपुर जिल्ला कावासोती स्थायी घर भई
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०८:५७0
भक्तपुर, ३० फागुन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । परीक्षाका लागि देशभर एक हजार ४९ केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका प्रवक्ता तथा उपनियन्त्रक जयन्ती सत्यालले जानकारी
कांग्रेसले आज सानेपामा आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिने, प्रतिपक्षमा रहँदा कसरी बोल्ने भन्ने सिकाउने
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०८:४९0
काठमाडौं, ३० फागुन । कांग्रेसले संघीय संसद् र प्रदेश संसदमा रहेका आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ । बुधबार बिहान पार्टी कार्यालय सानेपामा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको हो । संघीय
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०८:४५0
दार्चुला– केही साताअघि भारतीय पक्षबाट सीमा नदी महाकालीमा काठेपुल बनाएको र नेपाली भुमि भएर डोजर ढुवानी गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई रोक्न नेपाली सेनाले सीमा क्षेत्रमा गस्ती थालेको छ।दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित नेपाली सेनाको दुर्गादल गुल्मबाट
Previous 1 … 1,560 1,561 1,562 … 2,199 Next
आर्थिक समृद्धि र समाजवादोन्मुख राज्यका निम्ति सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण :प्रचण्ड